Pamper inja yakho nale ubhekeni enongiwe uwoyela CBD izilwane, ukudayiswa 29% Isaphulelo
Ukukwazisa, uma uthenga into kuyabonakala lapha, I-Mashable angazuza i ikhomishana lobulungu.
Abanye abanikazi bezinja kungase uwoyela CBD ukuphungula ezinye izifo inja yakho. Qinisekisa ukuthi ngokuzenzakalelayo uhlola lokhu kuqala nge wezilwane wakho.
isithombe: medix CBD
Ngu-TEAM Commerce I-Mashable Iziphesheli 2019-01-19 10:00:00 UTC
Mhlawumbe usuke wezwa ezinye zezinzuzo ebonisa wezokwelapha CBD ngenxa yabantu bakithi, kodwa bewazi yini ukuthi inja yakho Ungase futhi uthole ukusebenza? kungekho, Ngeke uthole doobies doggie emashalofini isilwane ezitolo, kodwa * unga * ibhodlela cannabidiol hondvriendelijke (CBD) uwoyela lapho ekhuluma ikhambi lemvelo ngokuphelele izifo eziningana.
CBD kuyinto into-non-ingqondo lapho butholakala isitshalo insangu, okuyinto esetshenziswa emakethe spa isilwane ezikhukhula, ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, njengoba ikhambi Arthritis, Angst, ukucindezeleka, ukuquleka nemithombo olungafani ubuhlungu chronic. Kwathiwa wacosha njengoba isilinganiso okuthuthukisa ngoba nomdlwana nomdlavuza, kusolakala ukuthi ukubasiza bazizwa bekhululeke kakhudlwana futhi ukulawula izimpawu ezifana isicanucanu futhi angafuni kudla.
BHEKA FUTHI: Izwe ezididayo CBD- futhi baqonde iTHC okungu
Uma ufuna i ezingabizi, non-enobuthi indlela yokuthuthukisa izinga lempilo yakho, futhi bafuna ukwazi ukuthi lo mkhuba amafutha CBD, ke kwasekuqaleni ukuqala wezilwane wakho. Thatha look at the uwoyela Pet CBD Medix ka CBD ngoba izinja ezinkulu. It has a Smoky, nephunga elinamakhasi kanye ubhekeni elungisiwe ukwenza ukuze umlomo yenja uthole amanzi osheshayo. kuyinto Late ukudayiswa esitolo se-Mashable $ 35, Isaphulelo 29% intengo yokuqala $ 49,99 .
Ufuna ukubonisa imikhiqizo yakho ku-Mashable Isitolo? Funda indlela imikhiqizo yakho inthanethi unga ukuthengisa !